Sidee loo kaydiyaa taraafikada DNS-ka ee Linux oo leh DNSCrypt? | Laga soo bilaabo Linux
Maanta ilaalinta xogtaada, iyo sidoo kale iskuxirkaaga shabakada iyo aaladahaaga wax dambe maahan taasi kaliya dadka aqoonta sare leh ama shirkadaha waa inay sameeyaan.
Waqtigan aan aragno sida aan u kordhin karno asturnaantayada Linux, waxa aan sameyn doonno ayaa ah inaan gacanta ku dhigno cidda arki karta macluumaadka raadinta DNS.
In kasta oo aysan gabi ahaanba qarin doonin taraafikada IP-ga oo dhan, waxay ka hortagi doontaa weerarrada isdabamarinta ee halista ah ee DNS, iyagoo hubinaya nabadgelyo aad u weyn.
Linux, habka ugu wanaagsan ee looqarin karo taraafikada DNS waa isticmaalka DNSCrypt.
DNSCrypt waa borotokool shabakad loogu talagalay in lagu xaqiijiyo taraafikada DNS (Nidaamka Magaca Magaca) ee u dhexeeya isticmaaleha kumbuyuutarka iyo magacyada soo noqnoqda ee server-yada.
DNSCrypt waxay duubtaa taraafikada DNS ee aan la beddelin ee u dhexeeya macmiilka iyo xalliyaha DNS ee qaab dhismeedka 'cryptographic' si loo ogaado fadeexad. In kasta oo aysan bixin amniga dhamaadka-dhamaadka, waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta shabakadda maxalliga ah ee ka dhanka ah weerarrada man-iyo-dhexe.
Waxay sidoo kale yareyneysaa weerarada ballaarinta UDP-ku saleysan iyadoo loo baahan yahay su'aal inay ugu yaraan u weynaato jawaabta u dhiganta. Sidaa darteed, DNSCrypt waxay ka caawisaa ka hortagga faafinta DNS.
DNSCrypt sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa xakamaynta marin u helka.
1 Sidee loo rakibaa DNSCrypt Linux?
2 Sidee loo qaabeeyaa DNSCrypt-ka Linux?
Sidee loo rakibaa DNSCrypt Linux?
Si aan ugu rakibno korantadan nidaamkayaga, waa inaan raacnaa tillaabooyinka aan hoos ku wadaagno iyadoo loo eegayo qaybinta Linux ee ay isticmaalayaan.
Waa inaad ogaataa in adeegga 'DNSCrypt' uu ka mid yahay ficil ahaan inta badan meelaha lagu keydiyo Linux.
Si aad u jartidr rakibi DNSCrypt on Debian, Ubuntu, Linux Mint iyo qaybinta ka soo jeeda kuwan, waa inay furaan terminal oo ay ku dhex fuliyaan amarka soo socda:
Arinta ah kuwa isticmaala Arch Linux iyo noocyo kala duwan:
Kuwa isticmaalaya Fedora iyo deriska:
Ugu dambeyntii, waayo kuwa isticmaala nooc kasta oo OpenSUSE ah:
sudo zypper ku rakib dnscrypt-proxy
Sidee loo qaabeeyaa DNSCrypt-ka Linux?
Marka korontada lagu rakibo nidaamka, waa lagama maarmaan in aan u qaabeyno maadaama xitaa la rakibay, weli ma shaqeyneyso.
Tani waa inaan adeegsano adeegga DNS, oo ay jiraan fursado badan oo bilaash ah iyo ikhtiyaarro lacag ah.
Waa muhiim inaad raacdo DNS kaleHalkii aad ku dhagi lahayd midda ISP-ga ay siiso iyaga, haddii aad rabto ammaan dheeraad ah.
Waxay dooran karaan midka iyaga ku habboon, waxaan heysanaa fursado furanDNS, CloudFlare kuwa kale,
Hadda Waa inaan gujino astaanta shabakada oo aan wax ka bedelno isku xirnaashaheeda.
Halkaní Waxaan iskudayeynaa xulashada IPv4, oo waxaan raadineynaa "Server Servers". Sanduuqa qoraalka "DNS Servers", ku dheji cinwaanka soo socda:
Kaliya ku dar cinwaanka DNS ee soo socda pWixii IPv4:
Halka loogu talagalay IPv6:
Ka dib markii la isku hagaajiyo barnaamijka 'DNSCrypt', waxaa aad loogu baahan yahay in maareeyaha shabakada dib loogu bilaabo amarka soo socda.
Solo kaliya qor:
Dejinta aasaasiga ah ee u oggolaaneysa aaladda DNSCrypt inay shaqeyso ayaa jirta. Waxa ugu dambeeya ee la sameeyo ayaa lagu dabaqayaa astaanta 'DNS' ee xariiqda taliska.
Taasina waa taas, waxay mar horeba ku isticmaalayeen adeeggan weyn nidaamyadooda. Haddii aad rabto inaad joojiso adeegga DNSCrypt, kaliya qor amarka soo socda
Y Si aad gabi ahaanba u joojiso, ugana hortagto inuu socdo bilowga, kaliya qor:
Waxaad ka heli kartaa macluumaad badan shabakadda, sida loo qaabeeyo DNSCrypt, iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee DNS ee lagu dhex isticmaali karo, kaliya iska hubi Wiki-ka DNSCript. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato, waad la tashan kartaa xidhiidhkan iyo waliba kan kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee loo kaydiyaa taraafikada DNS-ka ee Linux oo leh DNSCrypt?
Salaan Maqaal weyn. Waana mid xiiso leh kahortagga weerarada MitM. Laakiin waxaan helayaa khaladka soo socda "[ERROR] Ma xalinaayo magacan [Cloudflare-dns.com] ee laga helo liiska [/usr/share/dnscrypt-proxy/dnscrypt-resolvers.csv]" "markii aan galayo amarka sudo dnscrypt-proxy - R Cloudflare-dns.com.
Hubi feylka dnscrypt-resolvers.csv oo DNS CloudFlare kuma qorna.
Suurtagal ma tahay in aan la cusbooneysiin ama in sababo jira awgood aan la dhigin?
Waxaan u maleynayaa "Cloudflare-dns.com" waxaa loola jeedaa serverka DNS ee aad isticmaali doontid halkii aad ka isticmaali laheyd IPS DNS
Ku jawaab Gregory
Kali Linux 2018.3 ayaa la socota warar